Ny alika mahatoky - Fiangonan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao Soisa
haino aman-jery > Journal succession > 2014-03 mpandimby ny Magazine > Ilay alika mahatoky
Alika dia biby mahatalanjona. Noho ny fofona tsara, dia manenjika ireo sisa tavela amin'ny tranobe mirodana izy ireo, mahita fanafody sy fitaovam-piadiana mandritra ny fanadihadian'ny polisy, ary misy ny milaza fa mety hahita tsindrona amin'ny vatan'olombelona mihitsy aza izy ireo. Misy alika mahatsapa ny fofon'ny trozona rivo-doza tandindomin-doza izay miaina amin'ny morontsiraka avaratra andrefan'i Etazonia. Ny alika dia tsy manohana ny olona amin'ny alalàn'ny fofona fotsiny, mitondra fampiononana na fanompoana amin'ny alika mpitari-dalana ihany koa.
Na izany aza, ny alika dia manana anarana ratsy ao amin'ny Baiboly. Aleo atrehana izany: manana fahazaran-dratsiny fotsiny izy ireo. Fony aho zazalahy kely dia nanana alika ho biby fiompy aho ary nilelaka izay rehetra tonga tao aminy taloha kelin'izay, ary koa ny tanjona izay mahita fahafinaretana amin'ny teny adalany. "Toy ny alika mihinana izay nandrorany indray, dia toy izany ny adala izay manao hadalana hatrany hatrany" (Ohabolana 26:11).
Mazava ho azy fa tsy mahita zavatra avy amin'ny fomba fijerin'ilay alika i Solomona, ary tsy eritreretiko na iza na iza afaka manao izany. Moa ve fiverenan'ny vanim-potoana tamin'ny andro nampodinan'ny renin'ny alika ny sakafony mba hanomezana azy ho an'ny alika hohaniny, toy ny fanaon'ireo alika afrikana ankehitriny? Na ny vorona sasany aza manao izany. Ezaka fandevonana ny sakafo tsy voatanisa ve izy io? Vao haingana aho no namaky momba ny trano fisakafoanana lafo vidy izay hanina mialoha ny sakafo.
Raha ny fahitan’i Solomona azy dia toa maharikoriko io fihetsiky ny alika io. Mampahatsiahy azy ny olona adala izany. Hoy ny adala anakampo: Tsy andriamanitra izany. ( Salamo 53:2 ). Ny adala mandà ny fahambonian'Andriamanitra eo amin'ny fiainany. Ny adala dia miverina amin'ny fomba fisainany sy ny fiainany. Averiny ny fahadisoana mitovy. Voafitaka ny fisainan’ny adala, raha mino izy fa mitombina ny fanapahan-kevitra raisina tsy misy an’Andriamanitra. Nilaza i Petera fa izay mandà ny fahasoavan’Andriamanitra ka miverina amin’ny fiainana tsy tarihin’ny Fanahy dia tahaka ny alika mihinana izay rorany (2. Petrus 2,22).
Ahoana ary no handrava ity faribolana ratsy ity? Ny valiny dia, aza miverina mandoa. Na inona na inona fomba fiaina feno fahotana ataontsika dia aoka isika tsy hiverina any. Aza averina intsony ireo lamina taloha momba ny fahotana. Indraindray ny fahazaran-dratsy dia azo ampiofanina amin'ny alika, fa ny adala kosa ho mafy loha ka tsy hihaino raha ampitandremana. Aoka isika tsy ho tahaka ny adala izay manamavo ny fahendrena sy ny fananarana (Ohab 1,7). Avelao ny Fanahy hitsapa antsika sy hanova antsika mandrakizay mba tsy hahatsapantsika intsony ny filàna hiverina amin’ny mahazatra. Hoy i Paoly tamin’ny Kolosia mba hiala amin’ny fitondran-tenany taloha: “Koa vonoy ankehitriny ny momba ny tany, dia ny fijangajangana, ny fahalotoana, ny firehetam-po mahamenatra, ny fanirian-dratsy ary ny fieremana, izay fanompoan-tsampy. Noho izany zavatra izany no mahatonga ny fahatezeran'Andriamanitra amin'ny zanaky ny tsi-fanarahana. Tamin'izany rehetra izany koa no nandehananao, fony mbola velona teo. Fa ankehitriny esory aminareo ny zavatra rehetra: fahatezerana, fahatezerana, lolompo, fitenenan-dratsy, teny mahamenatra aloaky ny vavanareo.” ( Kolosiana 3:5-8 ). Soa ihany fa afaka mianatra zavatra avy amin'ny alika isika. Nanaraka ahy foana ny alika tamin'ny fahazazako - na tamin'ny fotoana tsara sy tamin'ny ratsy. Navelany hanabe sy hitarika azy aho. Na dia tsy alika aza isika, tsy afaka manazava ho antsika ve izany? Aoka isika hanaraka an’i Jesosy na aiza na aiza hitondrany antsika. Avelao Jesosy hitarika anao, tahaka ny amboa mahatoky tarihin’ny tompony be fitiavana. Aoka ianao ho mahatoky amin’i Jesosy.